Fiparitahan'ny valanaretina :: Tafakatra sivy ambin’ny folo ny olona voan’ny “Coronavirus” • AoRaha
Mivoatra hatrany ny tarehimarika momba ny fisian’ ny aretina Coronavirus eto Madagasikara. Olona roa vaovao indray no voamarina tamin’ny fitiliana fa mitondra ny tsimok’aretina « Covid-19”. Hatramin’ny omaly tamin’ ny 12 ora antoandro, dia niampy roa ny olona tratran’ity aretina ity. Nandeha tamin’ny zotram-piaramanidina MD 051, tamin’ny 18 marsa lasa teo, izy roa ireo.
“Nisy ny fizahana natao tamin’ny olona enimpolo natoka-monina sy ny mpifanerasera akaiky tamin’izy ireo. Tao anatin’izany no nahitana tranga vaovao, dia vehivavy roa. Sivy ambin’ny folo, hatreto, no fantatra fa mitondra ny “Coronavirus” eto Madagasikara. Ireo olona avy any amin’ny firenena nahitana an’io aretina io tonga teto amintsika izy rehetra”, hoy ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, misahana ny famoaham-baovao etsy amin’ ny Ivon-toeram-pibaikoana momba ny ady amin’ny “Covid-19”, nandritra ny fandaharana manokana tamin’ny haino aman-jery, omaly.
Maripanan’ny marary iray
Nohamafisiny fa tsy nahitana ny soritr’aretin’ny coronavirus ny valo ambin’ny folo amin’ireo olona mitondra ny tsimok’aretina Covid-19 ireo. Ny iray no misy hafanana saingy mihatsara ny fahasalamany. Tsy misy ny tena atahorana ny toe-pahasalamany hatreto. Tsy tonga amin’ilay fahasemporana be ilàna fitaovana hanampiana ny fitaovam-pisefoana ihany koa. Tsy nisy ny aina nafoy eto Madagasikara.
Ankoatra izay, efa hita avokoa ireo olona 22 nanaovana fikarohana, omaly, araka ny vaovao avy amin’ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina.
Fiatoan’ny fitaterana :: Fianakaviana maromaro tavela eny amin’ny fiantsonana Fasan’ny Karana